हाडजोर्नी एक–समस्या अनेक - Saptakoshionline
हाडजोर्नी एक–समस्या अनेक
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २०, २०७५ समय: १३:१६:२१
प्रा.डा. शिशिर लाखे
वरिष्ठ अर्थेपेडिक सर्जन प्रा.डा. शिशिर लाखे ललितपुर भैंसेपाटीस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले अहिलेसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा गरेर तीन हजार भन्दा बढीको घुँडाको सफल शल्यक्रिया गरिसक्नुभएको छ ।
अर्थोपेडिक अभ्यासमा डाक्टरले विभिन्न किसिमको हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्याको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये मुख्यतः फ्र्याक्चरको उपचार र आर्थराइटिसको उपचार पर्दछन् ।
साधारणतया लड्दा एउटा या दुईवटा हड्डी भाँचिन सक्छ तर, कहिलेकाँही सडक दुर्घटना वा भीर र रुखबाट लडेर शरीरका धेरै हड्डी भाँचिन सक्छन् । जस्तैः एउटै बिरामीको सडक दुर्घटनामा परेर ढाड, तीघ्रा, घुँडाका हड्डी भाँचिन सक्छ जसलाई मल्टिपल फ्र्याक्चर भनिन्छ । तर, हड्डी मात्र नभएर टाउकोको चोट वा आन्द्रामा चोट लागेमा त्यस अवस्थामा पोलीट्रमा भनिन्छ । यो अत्यन्तै गम्भीर चोट हो । कुनै बिरामीको हाडजोर्नीको मात्र समस्या भयो भने अर्थोपेडिक सर्जनले उपचार गर्न सक्दछन् भने पोलिट्रमाको अवस्थामा विभिन्न सङ्कायका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको आवश्यकता पर्दछ ।
उमेर बढ्दै गर्दा शरीरको सबै अङ्गहरू पनि बिस्तारै बिग्रदै जान्छन् । यसैगरी उमेर बढ्दै गर्दा जोनीहरू पनि बिस्तारै खिइँदै जाने प्रक्रियालाई ओस्टियो आर्थराइटिज भनिन्छ । जब मानिस बढ्ने प्रक्रिया रोकिन्छ, तब हड्डीका समस्याहरू प्राकृतिक रुपमै सुरु हुन थाल्दछन् । यस प्रकारको समस्याहरू २० देखि २२ वर्षबाट सुरु हुने भएपनि ४० वर्षमाथि रोगका लक्षणहरू देखा पर्न थाल्दछन् । सुरु–सुरुमा दुःखाई कम हुने भएपनि पछि यो जटिल हुँदै जान सक्छ ।
यस प्रकारको समस्यामा प्राथमिक चरण दुःखाईको तीव्रता र अवधि कम हुन्छ भने रोग बढ्दै जाँदा तीव्रता र अवधि दुवै बढ्दै जान्छ । सुरुवाती बेलामा ओस्टियोआर्थराइटिजले उपचार फिजियोथेरापी र पेनकिलर हो भने मध्यावधिमा पेनकिलर बढि खानुपर्ने, सुई लगाउनुपर्ने र कहिलेकाँही आर्थोस्कोपीको शल्यक्रिया । अन्त्यमा कुनै पनि उपचार पद्धतिबाट पीडामुक्त गर्न नसकिएको खण्डमा जोर्नी प्रत्यारोपणबाहेक अरु विकल्प रहँदैन ।
दौडिंदा, खेल्दा, दुर्घटनामा परेर घुँडाभित्रको नसा, वासर कार्टलेजमा भएको इन्जुरी दूरवीन पद्धतिबाट हेरेर गरिने शल्यक्रियालाई आर्थोस्कोपी भनिन्छ । यस पद्धतिबाट ओस्टियोआइटिसका कारण खिइएको जोर्नी, घुँडा मड्केको, नसा च्यातिएकार्टलेज बिग्रिएको र झिल्ली सुन्निएको, ट्रमा समस्या आदि उपचार गर्न सकिन्छ । यो काँध रहिपको जोर्नीमा पनि प्रयोग थालिएको छ ।
जोर्नीमा भाँचिएको कुरकुरे हड्डी निकाल्ने, नसा, राख्ने, सुन्निएको झिल्ली निकाल्ने आदि जस्ता काम यो आर्थोस्कोपी शल्यक्रियाबाट गर्न सकिन्छ ।
घँुडामा देखिने समस्या
घुँडामा विभिन्न किसिमका आर्थराइटिज देखिनसक्छ । यीमध्ये ओस्टियो आर्थराइरिस सबैभन्दा व्यापक छ । ओस्टियोबाहेक बाथरोग भन्ने बेग्लै किसिमको आर्थराइटिज पनि देखिन्छ । यसलाई अङग्रेजीमा रियोमोटोइड आर्थराइटिज भनिन्छ । ओस्टियो आर्थराइटिज जस्तो नभएर बाथरोग कम उमेरमा पनि देखिन्छ र लक्षणहरू बढी जटिल र उपचार पनि सोही अनुरुप रहन्छ । जोर्नी बिगार्नमा ओस्टियो आर्थराइटिज भन्दा बाथरोग बढी घातक छ । लामो समयसम्म कडा किसिमको औषधि खानुपर्ने हुन्छ जसले पूर्ण निदान गर्न नसकेपनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । जोर्नी यति द्रूत गतिमा बिग्रन्छ कि औषधि उपचारबाट मात्र पार नलागेर शल्यक्रियासम्म जानुपर्ने हुनसक्छ । शल्यक्रियामध्ये आर्थोस्कोपीदेखि प्रत्यारोपण या जोर्नी फेर्नेसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
मेडिकल र सर्जिकल उपचार
जोर्नी समस्याको सुरुवाती उपचार औषधिबाट हुन्छ । औषधिले दुःखाई कम गर्छ । यसका अलावा फिजियोथेरापी गरिन्छ । फिजियोथेरापीले घुँडा वरीपरीको मांसपेशीलाई द¥हो बनाउँछ । यसरी द¥हो भएको मांसपेशीले घुँडालाई सपोर्ट गर्नासाथ दुःखाई उपचारको ठूलो भूमिका हुन्छ । फिजियोथेरोपी सबै स्टेजका बिरामीहरूले गर्नुपर्छ । शल्यक्रिया गरिसकेका बिरामीले पनि फिजियोथेरोपी गर्नुपर्छ । यदि पेन किलर औषधीले तत्काल दुःखाई कम नभएमा सुइ लगाइन्छ । बिरामीको अवस्था र स्टेज हेरेर एउटादेखि तिन ओटासम्म सुई लगाउने गरिन्छ । यसले व्यक्तिको अवस्थाअनुसार ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म काम गर्नसक्छ ।
जब जोर्नी बिग्रेर अन्तिम अवस्थामा पुग्दछ र कुनैपनि उपचार पद्धतिले बिरामीलाई पीडामुक्त गराउन सक्दैन तब आजको युगको उपचार पद्धतिले जोर्नी प्रत्यारोपणको विकल्प दिएको छ । जोर्नी प्रत्यारोपण गर्दा जोर्नीको बिगे्रको भागलाई निकालेर त्यसको ठाउँमा कृत्रिम जोर्नी राखिन्छ जुन धातु र प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट बनेको हुन्छ । जोर्नी प्रत्यारोपण शल्यक्रिया प्रायजस्तो घुँडा र हिपमा गरिन्छ । यसले पीडित बिरामीहरूको कल्याणमात्र नभई नवजीवन नै दिएको छ ।
काँध दुख्ने समस्या
सडक दुर्घटना एवं कम्प्लेक्स चोटका कारण टेन्डन नसा च्यातिएमा काँध दुख्नसक्छ । उमेर बढ्दै गएपछि रक्तसञ्चारको कमीका कारण सुन्नि सक्ने, दुख्ने, हातमाथि लैजान गा¥हो, कपाल कोर्न, नुहाउन गा¥हो हुनेजस्ता समस्या देखापर्दछन् । यस प्रकारका समस्या काँधमा रक्तसञ्चारको कमी, उमेर, हड्डीको समस्या एवं वंशाणुगत कारणले हुनसक्छ ।
फिजियोथेरापीले निको नभएमा समस्याको प्रकृतिअनुसार आर्थोस्कोपी एवं ओपन सर्जरी गर्नुपर्छ । यी दुवै सर्जरीको परिणाम उस्तै आउँछ । शल्यक्रिया उपचारपछि ९० प्रतिशत सफल हुन्छ ।
आफ्नो पहिलो यौन सम्बन्ध महिलाले कस्तो चाहन्छन् ?
एजेन्सी । विवाहपछि यौन अनिवार्य हो । वैवाहिक जीवनमा दम्पतिबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि यौनले महत्वपूर्ण भूमिका न...
काठमाडौं। यौन जीवन कुनै पनि सम्बन्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ। इमोसनका साथै जोडीबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्छ। तर, यस...
किन लाग्छ महिलालाई यौन रोग यस्ता छन् कारणहरु
महिलालाई यौन रोग हुनु भनेको सामान्य कुरा हो । पुरुषको तुलनामा महिलामा यौन रोग हुने सम्भावना बढि हुन्छ । यौन रोगहरुको संक...
१ करोड २० लाखको स्वास्थ्य सामाग्री मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जापानबाट प्राप्त १० हजार पिस एन्टी जिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर...